Yakanakisa Inotsvedza Window Mugadziri uye Fekitori | Medo
MDTC152A Inotsvedza hwindo
Dhizaini nyowani inoita kuti nzvimbo iwedzere kuchinjika! Vanhu vanofarira kutsvedza hwindo funga kuti zviri nyore, inopa zvirinani kuona uye yakakura mweya, uye inochengetedza nzvimbo. Avo vasingazvifarire vanofunga kuti zvakashata pakuvhara uye mhepo kuramba kuita. Nepo MEDO dhizaini yawedzera iyo pamusoro pro uye nekugadzirisa iyo Cons kuti igadzire MDTC152A slimline inotsvedza hwindo.
Semi otomatiki kukiya system
Semi otomatiki padyo
Semi otomatiki yekukiya system uye yakasarudzika isina muchengeti furemu kupwanya kuburikidza neyechinyakare inotsvedza nzira yekukiya nzira.
Invisible kubhururuka pajira riya, slimline dhizaini
Yakavanzika nhunzi mesh. Inovandudza girazi pani uye flynet yekubatanidza chimiro dhizaini. Yakavanzwa bhandi, rakamanikana rakamanikana. Yemazuva ano uye yakashambidzika kunze tarisa. Panoramic maonero.
Dhizaini yemunhu, anti swing basa
Inonyaradza uye zorora uchizembera pachigaro chemaoko kana uchiona iyo nzvimbo. Chinogadziriswa anti-swing roller inoita kuti kutsvedza kugadzikane uye anotsvedzerera.
Yakavanzwa bhandi inopa panoramic maonero. Anti-guruva uye zvipembenene humbowo hwakavanzwa flynet inogona zvakanyanya kuchengetedza kuedza kwekuchenesa.
Multi-Rinoshanda Profiles Kuwedzera Kukosha Kwevatengi
MEDO ine akawanda ebetsero maprofile sarudzo yekuwedzera akawanda mabasa kune windows uye madhoo, kusangana akasiyana vatengi zvinodiwa. Uyezve, MEDO ine rakasimba R & D timu yekugadzirisa mhinduro yeakasarudzika basa reprojekti.
Yakaonda furemu mune slimline dhizaini:
Sezvo vanhu vemazuvano vanosarudza windows uye mikova mune hukuru hukuru nemaonero ari nani uye magetsi.
MEDO slimline masisitimu ane akatetepa mafuremu anonyatsogutsa kudiwa uku.
10-gore garandi yehardware, inova iyo chemhando yepamusoro muindasitiri.
Medo brand Hardware, Germany mhando Hardware uye US brand hari iri inowanikwa.
Mhando dzakasiyana dzekubata dzinowanikwa.
Customization sevhisi inogamuchirwa.
One-Stop Service uye technical Solution Provider
MEDO inopa imwechete-yekumira sevhisi nemhinduro dzakanakisa kusangana nezviitiko zvakasiyana uye zvinodiwa nevatengi. Nechigadzirwa chekugadzira muFoshan China, MEDO inonakidzwa nezvakanakira muindasitiri maitiro, kuendesa cheni, mutengo uye kutakura nezvimwe.
Pashure: Slim Simudza & Slide Sisitimu
Zvadaro: Slimline inotsvedza System